Barbados Oo Noqotay Jamhuuriyad Ka Madaxbanan Boqortoyada Ingiriiska – somalilandtoday.com
Barbados Oo Noqotay Jamhuuriyad Ka Madaxbanan Boqortoyada Ingiriiska
Barbados ayaa si rasmi ah uga hoos baxday xukunkii boqorada Uk Elizabeth II waxaana ay noqotay jamhuuriyad madax bannaan, sidaa waxa lagaga dhawaaqay xaflad habeen hore ka dhacday caasimada wadankaas ee Bridgetown.
Dame Sandra Mason ayaa loo dhaariyay xilka madaxweynenimo iyada oo lagu guda jiro munaasabad lagu xusayay sanadguuradii 55-aad ee ka soo wareegtay xornimada dalka.
Amiirka Wales iyo fanaanada Barbadiyaanka ee Rihanna ayaa ka soo qayb gashay xaflada.
Khudbad uu jeediyay, Amiir Charles waxa uu ku qiray “xasuusnimada foosha xun ee addoonsiga” ee jasiiradda Kariibiyaanka soo gaadhay.
Si loo caddeeyo isbeddelka rasmiga ah ee awoodda, salaan kama dambays ah ayaa loo sameeyay boqortooyadii Ingiriiska waxaana hoos loo dhigay oo la beddelay calanka Boqortooyada ee loo yaqaano Standard.
Isaga oo ka hadlayay marti sharaftii xaflada, Amiir Charles waxa uu ku celceliyay sii wadida xidhiidhka labada qaran in kasta oo uu isbedel ku yimid heerka dastuuriga ah.
Waxa uu xilligan ku tilmaamay bilow cusub ka hor inta aanu madaxweynaha cusub ku abaalmarin Amarka xoriyadda ee Barbados.
Boqoradda ayaa dalka u dirtay “rajooyin wanaagsan” oo ay u rajaysay “farxad, nabad iyo barwaaqo mustaqbalka ah” waxaanay sheegtay in qaranka Barbados uu qalbigeeda meel ku leeyahay.
Dame Sandra Mason, oo 72 jir ah, maamulka Jasiiradan Badhasaab uga ahayd Ingiriiska tan iyo 2018, ayaa noqotay madaxweynaha qaranka ka dib kadib codbixintii baarlamaanka bishii hore. Waxay hadda ghashay halkii boqoradda ugu jirtay dalkaa.
Dame Sandra Mason, Madaxweynaha cusub waxay tidhi” Doonidii Barbados waxay u dhaqaaqday safarkeedii ugu horreeyay. Ilaahow naga qabooji dhammaan duufaannada oo dalkeenna iyo muwaadiniintiisuna si nabad ah ugu sugnaadaan cidhif kasta iyo xeebahaba,” ayay tidhi ka dib markii la dhaariyay.
Barbados ayaa ku dhawaaqday qorshaheeda inay noqoto jamhuuriyad sannadkii hore, laakiin waxay ku sii jiri doontaa Commonwealth.
Madaxda ugu sareysa dalka oo ay ku jirto Ra’iisul Wasaare Mia Mottley, ayaa Madaxweynaha cusub hortiisa lagu dhaariyay inay daacad u yihiin Barbados, xaflada oo socotay saacado badan.
Xafladu intii ay socotay xiddigta Heesaha ee Rihanna ayey madaxweyne Mason u magacowday halyey qaran. Gabadhan oo heesaa iyo ganacsato ah ayaa magaceeda oo buuxaa uu yahay Robyn Rihanna Fenty, waxaana hore safiir loogu magacaabay dalkeeda hooyo sanadkii 2018-kii .
“waxaan kuu rajaynayaa in aad u dhalaasho sida dheeman oo kale oo aad sharaf u soo jiidato qarankaaga,” ayay tidhi Ms Mottley, iyada oo tixraacaysa mid ka mid ah heesaha Rihanna.
Habeen aad u kulul oo cimilada Barbados ah, ayaa la qabtay xaflada xil wareejin ah oo isugu jirtay, Madaalo, xus iyo isu imaatin weyn.
Waxay ahayd bandhig qaran oo lagu rusheeyey magacyadii ugu caansanaa ee jasiiraddan sida xiddiga Kirikit-ka Sir Garfield Sobers iyo fanaanada Rihanna.
Labadooduba waxay hareeraha ka fadhiyeen amiirkii Wales, Amiir Charles waxay u ahayd daqiiqad dareeno kala duwan leh – waxa uu qaatay salaantii ugu dambaysay wuxuu daawaday heerka Royal oo hoos loo dhigay
iyo hooyadii laga qaaday Jasiirada.
Wuxuus sheegay inuu xannuunkii addoonsiga uu u bedeli doono saaxiibtinimada waarta ee labada ummadood ah.Haatan ma joojin karaan isbeddelka dastuuriga ah laakiin waxay isku dayi karaan inay hubiyaan in xidhiidhada wanaagsani sii jiraan.
Ra’iisul wasaaraha dalka ayaa ku tilmaamay u dhaqaaqista jamhuuriyada inay tahay “waqti xasaasi ah” oo la arki doono Barbados oo si buuxda uga bixi doonta waayihii gumeysiga.
Waxay ahayd mid ka mid ah gumeysigii ugu horreeyay ee addoonsiga ee Ingiriiska. Deganayaashii Ingiriiska ayaa markii ugu horreysay qabsaday jasiiradda 1627-kii, markii ay gacanta ku haysay Ingiriiska, waxay noqotay dhaqaale beerashada sonkorta iyada oo la adeegsanayo dadka addoonsiga ah ee laga keenay Afrika.
Addoonsiga waxaa lagu baabi’iyay Barbados 1834, waddankuna wuxuu si buuxda u madaxbannaanaaday 1966.
Khudbadiisii ​​salaasadii, Amiir Charles waxa uu kaga hadlay “xadgudubka argagaxa leh ee addoonsiga” kaas oo uu yidhi “Tani wasakh ayey ku ahaan doontaa ay taariikhdayada”.
Barbados ka hor, waddankii ugu dambeeyay ee boqoradda ka xayuubiya madaxa dawladda waxay ahayd Mauritius 1992.
Barbados waxa ku nool dad gaadhaya 285,000 oo qof, waana mid ka mid ah jasiiradaha Kariibiyaanka ta ugu dadka iyo barwaaqada badan.
Waxay si weyn ugu tiirsan tahay dhoofinta sokorta, balse dhaqaalaheedu wuu kala duwanaa laakiin waxaa si adag u saameeyay Covid-19 oo dhaawacaya dalxiiska iyo qiimaha sare u kaca ee ay sababto khalkhal ku yimaadda silsiladda saadka.